Sannadkii lixaad ee hijriyada wuxuu Rasuulka (scw) go'aan ku qaatay inuu ballaariyo dadaalkii uu ugu jiray fidinta dacwada islaamka, isagoo siddeed dhambaalood oo qoraal ah u kala diray boqorrada carbeed iyo kuwa cajam-ba, wuxuuna dhambaaladiisa ugu yeeray boqorradaas inay soo galaan diinta islaamka. Boqorradaas loo diray dhambaaladaas ayaa waxaa ku jiray Thumaama Binu Uthaal Al-Xanafi, wuxuu ka mid ahaa madaxda reer Banii Xaniifa, sidoo kale wuxuu ka mid ahaa boqorrada reer Yamaama ee aan amarkooda marnaba la khilaafin.
Thumaama Binu Uthaal ma uusan aqbalin dhambaalkii uu u soo diray Rasuulka (scw), isagoo iska dhega-tiray dacwadii xaqqa iyo kheyrka xanbaarsanayd, taasi waxaa kaba sii darneyd, isagoo sheydaanka uu tusay inuu isku dayo dilka Rasuulka (scw), iyo siduu u wiiqi lahaa dacwadii uu Rasuulka (scw) xanbaarsanaa. Wuxuu Thumaama u kuur-galay sidii uu uga takhallusi lahaa Rasuulka (scw). taasoo hadduusan si kedo ah uga badbaadeen khatar ahayd, Eebbe (sw) ayaa Nebigiisa ka badbaadiyay shartii uu la maagay Thumaama.
Hase ahaatee Thumaama Binu Uthaal haddii uusan ku guuleysan dilka Rasuulka (scw), waxaa hubaal ah inuu ku guuleystay jirdilka iyo dhibaateynta qaar ka mid ah asxaabtii Rasuulka (scw). Wuxuu Thumaama u tafa xeetay leynta saxaabada jeer uu sabab ugu noqdo inuu laayo qaar ka mid ah asxaabtaas, dhinaca kale wuxuu banneeyay dilka Rasuulka (scw), isagoo arrinkaasna ogeysiiyay qabiilkiisa reer Banii Xaniifa.
Safarkiisii uu Makka u kicitimay
Waqi badan kama soo wareegan jeer uu maalintii danbe Thumaama Binu Uthaal go'aansaday inuu u kicitimo Makka, isagoo doonaya inuu soo cimreysto, wuxuu Thumaama ka ambabaxay gobolkii Yamaama, isagoo ku sii jeeda xagga magaallada Makka, wuxuuna naftiisa ugu sheekeynayay inuu ku soo dawaafi doono hareeraha Kacbada iyo inuu u gowrici doono asnaamtii ku hareersanayd Kacbada.
Goor uu Thumaama ku jiro socdaalkiisa, una u dhow yahay magaallada Madiina ayaa waxaa isagoo aan filanaynin ku soo baxay koox ilaalo ah, Ilaaladaas oo ka mid ahaa ilaaladii ciidamada muslimiinta waxay watigaas ku gaaf wareeganayeen degmooyinka ku dhow dhow magaalada Madiina, si ay uga hortagaan haddii uu cadow magaalada soo galo. Waxay ilaaladii soo kaxeysteen Thumaama Binu Uthaal, weliba iyagoo aan aqoon u lahayn ninka ay soo qafaasheen. Markii ay yimaadeen Madiina waxay Thumaama ku xireen mid ka mid ah tiirarkii masjidka, dabadeedna waxay la sugeen Rasuulka (scw) bal si uu go�aan uga gaaro arrinkiisa.
Markii uu yimid Rasuulka (scw) masjidka ee uu damcay inuu soo galo gudaha masjidka ayaa waxay indhihiisa qabteen Thumaama Binu Uthaal oo ku xiran mid ka mid ah tiirarka masjidka, Rasuulka (scw) wuxuu weydiiyay asxaabtiisa �ma taqaanaan ninka aad soo qabateen?�, Asxaabtii waxay yiraahdeen �maya Rasuulkii Allow�, wuxuu Rasuulka (scw) ku yiri �waa Thumaama Binu Uthaal ee ahaa reer Banii Xaniifa ee wanaajiya la dhaqankiisa�, Intaa kadib wuxuu Rasuulka (scw) u laabtay reerkiisa, isagoo ku yiri �soo aruuriya wixii cunto ah ee aad haysaan, waxaadna u geysaan Thumaama Binu Uthaal�.
Dhinaca kale wuxuu Rasuulka (scw) amray in hashiisa looga liso Thumaama subixii iyo galabtii, loona geeyo si uu u dhamo caanahaas, maamuusiddaas iyo wanaaggaas uu Rasuulka (scw) u qaddimayo Thumaama waxay dhacday ka hor intuusan xabiibka Suubbanaha Rasuulka (scw) la kulmin ama uusan la hadlin Thumaama bin Uthaal, Intaa dabadeed wuxuu Rasuulka (scw) soo aaday xaggii Thumaama, isagoo doonaya inuu si tartiib ahaan uu u soo geliyo diinta islaamka.
Wuxuu Rasuulka (scw) ku yiri Thumaama:�maxaad haysaa Thumaamow?� Thumaama wuxuu yiri �waxaan hayaa kheyr Muxammadow.., haddaad dishid waxaad dishay nin dhiig idinka galay, haddaad gallad sameysidna waxaad ku galladaysatay qof kugu mahadinaya, haddiise aad doonaysid maal, weydiiso intaad doontid ayaa lagaa siin�e��. Rasuulka (scw) wuu isaga tagay isagoo Thumaama ku xirnaa tiirkiisa labo maalmood, halkaasna loogu geynayo cuntada iyo cabbitaanka, loogana soo lisayo hashii Rasuulka (scw). Maalintii danbe ayuu Rasuulka (scw) u yimid Thumaama wuxuuna markale ku yiri �maxaad haysaa Thumaamow?�, Thumaama wuxuu yiri, ma hayo waxaan ka ahayn hadalkii aan horey kuugu iri, haddaad gallad sameysid waxaad ku galladaysatay qof kugu mahadinaya, haddaad dishid waxaad dishay nin dhiig idinka galay, haddiise aad doonaysid maal, weydiiso intaad doontid ayaa lagaa siin�e..
Haddana sidii oo kale ayuu isaga tagay Rasuulka (scw), jeer uu misna markale u yimid isagoo ku leh �maxaad haysaa Thumaamow?�. Wuxuu yiri: �hadalkii hore un baan hayaa.., haddaad gallad sameysid waxaad ku galladaysatay qof kugu mahadinaya, haddaad dishid waxaad dishay qof dhiig idinka galay, haddiise aad doonaysid maal, weydiiso intaad doontid ayaa lagaa siin�e�, intaa ka dib wuxuu Rasuulka (scw) jaleecay asxaabtiisa wuxuuna ku yiri �iska sii daaya Thumaama..�, Asxaabtii waxay xargaha ka fureen Thumaama, dabadeedna sidii ayeey ku sii daayeen.